Mpanamboatra Ultrafiltration - Mpamatsy & Factory Factory Ultrafiltration China
5659 Countertop UF manadio rano
Manala amin'ny fomba mahomby ny ankamaroan'ny bakteria, zavamiaina bitika ary zavatra hafa tsy ilaina amin'ny rano.
Mampiavaka ny membrane ultrafiltration 0.01μm mba hiantohana ny tahan'ny fihenan'ny 99,99%.
Miaraka amin'ny sivana UF membrane dia afaka mitazona ireo mineraly mahasoa ao anaty rano hitazomana ny fahasalamanao.
Ny tahan'ny mikoriana avo hatramin'ny 2.5L / min (manodidina ny 0.66gpm), ankafizo ny rano tsy miova amin'ny fampiharana samihafa.
Ny fitsaboana ny rano Ultraviolet dia manampy amin'ny fanitarana ny halehiben'ny asany.
5685/5686 3-Dingana eo ambanin'ny Sink trano fonenana ultrafiltration rafitra fitsaboana rano
Ny fitaovana plastika misy ambaratonga ara-tsakafo dia miantoka ny rano madio sy tsy voaloto.
Mitahiry mineraly izay mahasoa ny vatan'olombelona.
Ny singa sivana amin'ny cartridge azo ampiasaina dia manampy amin'ny fitehirizana toerana ambanin'ny tototra ary mora amin'ny fametrahana sy fanoloana.
Ny famolavolana rano mihodina iraimbilanja iray mandroso dia afaka mampihena ny risika amin'ny famoahana, manome antoka ny fiarovana rehefa mahazo rano.
Smart faucet dia azo zahana amin'ny fizahana mora foana ny satan'ny androm-piainan'ny sivana ary raiso ny fotoana hanoloana ny sivana.
5210/5211 3-Dingana eo ambanin'ny Sink trano fonenana ultrafiltration rafitra fitsaboana rano
NSF 42, 53, 401 voamarina fa hanala ny loto 99,99% mahery ao anaty rano raha mitahiry ny mineraly izay mahasoa ny vatan'olombelona.
Ny mari-pamantarana ny androm-piainana dia misy hanaitra anao ny herin'ny bateria.
Manana karazana sehatra tokana, dingana roa ary dingana telo izahay hisafidianana. Ny rafitra dia mety miaraka amin'ny faucet koa.
5214 3-Dingana eo ambanin'ny filentehana an-trano rafitra fitsaboana rano
Ity famolavolana tsy misy tanky ity dia 4,72 santimetatra fotsiny ny sakany, izay manampy amin'ny fitsitsiana toerana eo amin'ny latabatra na eo ambanin'ny filentehana.
Esory mihoatra ny 99,99% ny loto ao anaty rano raha mitahiry ny mineraly izay mahasoa ny vatan'olombelona.
Sivana ny rafitra cartridge amin'ny patanton'ny fijanonan'ny rano hiantohana ny fampiasana fiarovana. Ny cartridges dia esorina amin'ny sisiny, tsy mila manidy ny valizy miditra na manainga ny rafitra, mora be manolo ny sivana.
Tonga miaraka amin'ny tontonana marani-tsaina mba hampisehoana aminao ny ain'ny serivisy fanivanana. Ny faucet marani-tsaina tsy misy firaka mifanaraka aminy dia fampahatsiahivana ara-potoana, tsy mila miondrika hijery ny masinina ao ambanin'ny filentehana.
Ny rafitra fanadiovan-drano UF dia afaka manivana rano roa litatra isa-minitra hahafahanao mahazo rano ao anatin'ny 6 segondra fotsiny.
5673 Rafitra fitsaboana rano amin'ny fanoherana ny Ultrafiltration
Sivan-drano countertop marani-tsaina izay manasongadina ny tondro ny sivana hampahafantarana anao ny fotoana hanoloana ny sivana.
Ny famolavolana mifono sy tsara tarehy dia mifanaraka amin'ny fomba ao an-trano rehetra ary tehirizo tsara ny toeran'ny latabatra.
Tonga miaraka amin'ny mpaninjara faucet hahazoana safidy mora eo anelanelan'ny rano manta sy ny rano voadio.
Ny fotony dia mifikitra mafy amina kaopy suction amin'ny fametrahana latabatra na kaontera, manome fitoniana mba tsy hivezivezy mandritra ny fampiasana azy.
Ny sarony mivoaka dia azo soloina 360 ° hahazoana malalaka ny rano.
5677 Rafitra fitsaboana rano amin'ny lozisialy Ultrafiltration
Sivan-drano marani-tsaina izay manasongadina ny fanoloana ny tondro sivana hampahafantarana anao ny fotoana fanoloana ny sivana.
Fanoloana sivana amin'ny cartridge amin'ny rano, Fanadiovan-drano ho an'ny rano mafy, Mpanadio rano amin'ny trano iray manontolo, Rafitra Osmosis Reverse tsara indrindra, Paompy Rafitra fanivanana rano, Sarina cartridges,